गर्भपतन चक्की प्रयोग पछि। चिकित्सा गर्भपात
चिकित्षकिय गर्भपतनको निम्ति त्यहाँ दुई विकल्पहरु छन्। दुवै तरिकाहरु प्रभावकारी छन्:
गर्भपाती चक्की प्रयोग गरेपछि तपाईँ कस्तो अनुभव गर्नु हुन्छ?
मिफेप्रिस्टोन प्रयोग गरे पछि:
मिफेप्रिस्टोन खाए पछि हल्का रगत बगेको देख्न सक्नु हुने छ। यो सामान्य कुरा हो तर तपाईँले रगत बगे पनि नबगे पनि सबै चरण पुरा गर्नु पर्छ।
मिसोप्रोस्टोल चक्की प्रयोग गरे पछि:
उमठ्ने र रगत बग्ने मुख्य असर हुन्। यी लक्षण उपयोगी हुन्छन् किनभने तिनले औषधीले काम गरि रहेको देखाउँछन्। तर तपाईँलाई कति उमठ्छ र कति रगत बग्छ?
कसैलाई बेसरी उमठ्छ, महिनावारीमा पनि उमठ्थ्यो भने त्यस भन्दा धेरै दुख्ने कडा उमठाइ
कसैलाई महिनावारीमा भन्दा धेरै रगत बग्छ। मिसोप्रोस्टोल लिएको केही घण्टा भित्र रगतका फाल्सा निस्कनु पनि सामान्य कुरा हो। गर्भको अवधि अनुसार फाल्साको आकार ठुलो वा सानो हुन्छ।
कसैलाई भने हल्का उमठ्ने र महिनावारीमा जस्तैसामान्य रगत बग्ने हुन्छ।
नियमित महिनावारीमा भन्दा बढी उमठ्यो र बढी रगत बग्यो भने नआत्तिनु होस्।
नराम्ररी उमठ्यो भने दुखाइ घटाउन आइब्युप्रोफन राम्रो औषधी हो। धेरै मुलुकमा २०० mg शक्तिको आइब्युप्रोफन डाक्टरको सिफारिस बिनै किन्न पाइन्छ। हरेक ६ देखि ८ घण्टामा ३ देखि ४ ओटा (२०० mg का) चक्की लिनुहोस्। यसले तपाईँको दुखाइ घटाउँछ।
तपाईँ मन लागेको खान र पिउन सक्नुहुन्छ।
बिसेक अनुभव नभए सम्म आरामदायी ठाउँमा रहने कोसिस गर्नुहोस्।
धेरैजसो महिलाहरु २४ घण्टा भित्र बिसेक भएको अनुभव गर्छन्।
तपाईँको शरीरमा बाँकी रहेका हर्मोनको कारणले गर्भपतनको दुई साता पछि सम्म पनि गर्भ परीक्षण सकारात्मक देखिन सक्छ। चक्कीको प्रयोग गरेपछि पनि गर्भका लक्षण (स्तन छुँदा दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, जिउ गल्ने आदि) अनुभव गरि रहनु भयो भने डाक्टरलाई देखाउनुहोस्।
गर्भ फाल्दा माथि उल्लेख गरेका लक्षण सामान्य हुन्। सावधान हुनुहोस्। तलका केही सङ्केतले तपाईँको स्थिति जटिल बन्न सक्ने खतरा देखाउँछन्।
धेरै मात्रामा रक्तस्राव:
गर्भ निस्के पछि २ घण्टा सम्म प्रति घण्टा सामान्य खालका २ ओटा टाला भिजेका छन् भने ज्यादै धेरै रक्तस्राव हो।यति धेरै रगत बग्यो भने तपाईँले चिकित्सकको सहयोग लिनु पर्छ। भिज्नु भनेको ठुलो टालो कहीँ ओभानो नरहेर पुरै भिज्नु हो।
आइब्युप्रोफन लिँदा पनि सुधार नहुने गरी साह्रै दुख्यो भने चिकित्सकको सहयोग खोज्नुहोस्। यस्तो तीव्र दुखाइले तपाईँमा गर्भ सम्बन्धी जटिलता भएको सङ्केत गर्छ। आइब्युप्रोफनले पनि कम गर्न नसकेको दुखाइ खतराको सङ्केत हुन सक्छ। हामी दुखाइबाट पीडित गर्भवती महिलालाई चिकित्सकको सहयोग लिन सल्लाह दिन्छौँ।
साह्रै अस्वस्थ अनुभव गर्नुभयो?
मिसोप्रोस्टोल लिएको दिन तपाईँलाई ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने हुन सक्छ। यस्तो हुनु सामान्य हो। गर्भपाती चक्की प्रयोग गरेपछि तपाईँले प्रतिदिन सुधार अनुभव गर्नु पर्छ, अस्वस्थता होइन। गर्भपाती चक्की प्रयोग गरेपछि आफू अझ अस्वस्थ भएको अनुभव भयो भने तपाईँले चिकित्सकको सहयोग लिनु पर्छ।